तपाईंको जीवनलाई 30 दिन ईबुकमा परिवर्तन गर्नुहोस् - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | अक्टोबर 26, 2018 | तपाइको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस, व्यक्तिगत विकास |0|
1 30 दिनमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्ने एक तरीका छ
1.1 तपाईं बन्न अरू कोही हुनुपर्दैन
1.2 के म वास्तवमै 30 दिनमा मेरो जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछु?
1.2.1 यो मेरो लागि कसरी काम गर्दछ?
1.2.2 मसँग धेरै पैसा छैन। म के गर्न सक्छु?
1.2.3 मसँग धेरै समय छैन। म के गर्न सक्छु?
तपाईको जीवनलाई Change० दिनमा परिवर्तन गर्ने एक तरीका छ
तपाईं बन्न अरू कोही हुनुपर्दैन
के म वास्तवमै 30 दिनमा मेरो जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछु?
त्यो तपाईं मा निर्भर गर्दछ! तपाइँको जीवन 30 दिनमा परिवर्तन गर्नुहोस् तपाइँलाई प्रशस्त अभ्यासहरू गरेर महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्न प्रक्रिया दिन्छ।
के तपाईंले कहिल्यै नयाँ पोशाक किन्नुभएको छ जसले तपाईंलाई महसुस गराउँछ र राम्रो देखाउँदछ, वा रेष्टुरेन्टमा खाएको छ जसले उत्कृष्ट खाना प्रस्तुत गर्दछ? यी चीजहरूले हामीलाई साँच्चिकै राम्रो महसुस गराउन सक्छ, तर ती प्रायः अस्थायी हुन्छन्।
जब तपाईं 30 दिनहरूमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्ने तरिकाहरू लागू गर्नुहुन्छ, मात्र यसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँदैन र तपाईंको जीवनमा राम्रो चीजहरूको लागि परिवर्तन गर्दछ; तपाईं दीर्घकालीन परिवर्तनहरू गर्नुहुनेछ।
तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् 30 दिनमा तपाईंको लगानी हो!
अब Ebook किन्नुहोस्
यो मेरो लागि कसरी काम गर्दछ?
30 दिनको ईबुकमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईंलाई जाँच्नको लागि विश्वासको अभ्यास र अभ्यासमा राख्न अनुमति दिन्छ तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ। 30 दिनहरूमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् प्रमाणित अभ्यासहरूको एक सेट समावेश गर्दछ जुन तपाईं आफैंमा अवास्तविक लक्ष्यहरू सेट नगरी पूरा गर्न सक्नुहुनेछ जुन प्रायः असफलताको कारण हुन्छ। केवल दिइएको दैनिक व्यायामलाई पूरा गर्नुहोस् र तपाईंले अनुभव गर्नुहुन्छ र सुधार देख्नुहुनेछ किनभने तपाईंको नयाँ विचारहरूले तपाईंलाई योग्य पुरस्कारहरू दिन्छ।
मसँग धेरै पैसा छैन।
सबैजनाले लाइफ कोच वा व्यक्तिगत प्रशिक्षकलाई उनीहरूको अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सक्दैनन्। थोरै मूल्यको लागि, यस ईबुकले तपाईंलाई सरल प्रेरणादायक अभ्यासहरू प्रदान गर्दछ जुन समय खपत गर्दैनन्, तपाईंको आफ्नैमा गर्न सकिन्छ; अझै तपाइँले गर्न चाहानुभएको परिवर्तनहरू अन्वेषण गर्न अनुमति दिनेछ।
मसँग धेरै समय छैन।
हामीले यो सुनिश्चित गर्‍यौं कि यस डाउनलोड गर्न योग्य ईबुकमा अभ्यास समय खपत वा जटिल छैन तर प्रभावकारी छैन! प्रत्येक दिन कोशिस र परिक्षण विधिहरु तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई सशक्त बनाउने र तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने जुन तपाई बनाउन चाहानुहुन्छ।
चाहे तपाईं आफ्नो सम्बन्ध परिवर्तन खोज्दै हुनुहुन्छ, जीवनको दृष्टिकोण वा तपाईंको क्यारियरमा यो पुस्तक खुशीको लागि अद्भुत यात्राको सुरूवात हुन सक्छ।
निर्णय गर्नुहोस् कि अब तपाइँको जीवन परिवर्तन र परिणामहरु हेर्नुहोस्।
पछिल्लोव्यक्तिगत विकास भिडियो के हो
अर्कोलेस ब्राउन प्रेरक भिडियो - चिनियाँ बाँस रूख
नोभेम्बर 1, 2020